Wararka Maanta: Isniin, July 26, 2021-Ramla Cali oo Soomaaliya matalaysay oo looga adkaaday tartankii feerka ee Tokyo
Ramla Cali ayaa muujisay dadaal fiican qeybtii hore ee cayaarta, balse qeybtii dambe ayaa laga helay dhibcaha looga guulaystay, sida ay sheegtay Faadumo Nuur Cali oo ah gudoomiye ku-xigeenka 2aad ee guddiga Olombikada Soomaaliya.
Waa markii ugu horaysay oo gabadh Soomaaliyeed ay ka qeyb qaadato tartanka dhinaca feerka ah, iyadoo matalaysa qaranka Soomaaliya
Gudoomiye ku-xigeenka guddiga Olombikada Soomaaliya, ayaa sheegtay in Ramlo looga guulaystay nasiib, waxayna ku amaantay in ay muujisay dadaalkeedii ugu badnaa.
“Waxaan leeyahay waan dadaalnay, gari labo nin kama wada qosliso. Waan dadaalnay, waana imaanay illaa iyo Tokyo. Tababar waan soo sameynay, juhdi badan waan soo galinay waxaan la harnay ma jiraan. Ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay, meesha ayaan kasii wadaynaa cayaaraha,” ayay tiri Faadumo Nuur Nuur.”
Saddexda bisha August, Cali Iidow Xasan ayaa Soomaaliya uga qeybgali galidoona tartanka orodada 1,500m (Kun iyo shanta boqol ee mitir).